Global Voices teny Malagasy » “Spambots” Twitter: Fomba Fiady Vaovao Mba Hampanginana Resaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Avrily 2011 6:50 GMT 1	 · Mpanoratra Jillian York Nandika miora
Sokajy: Fahalalahàna miteny, Teknolojia, GV Mpisolovava
Ny 18 Aprily, nanoratra  momba ireo “spambots” nikendry ny teny fototra #Syria mba hampanginana ny feo miantso, na mitatitra ireo fanoherana, i Anas Qtiesh. Raha nahasarika ny sain'ny maro ity tranga manokana ity, tao amin'ny Al Jazeera, Fast Company, sy tany an-toeran-kafa, dia tandindon'ny olana midadasika amin'ireo tambajotra sosialy izany: ny fampiasana ireo kaonty mandeha ho azy, na ireo ” bots”, mikendry teny fikarohana iray mba hampanginana ny karazana resaka anankiray.
Ity maraina ity dia ohatra iray hafa indray no nanaitra ahy: “Ahava spambots.” Ahava, Orinasa Israeliana izay miankina amin'ireo loharano avy any Cisjordanie (Tany Bodoina ao Andrefana), no kinendrin'ireo fanentanana hanao ankivy  maro. Ao amin'ny Twitter, ireo kaonty tahaka ny @BoycottAhava  dia mizara ireo vaovao sy fanampim-panazavana momba ilay ankivy, mandefa tweets amin'ny tànana. Ao anatin'izay lazaina ho ezaka handrendrika ny vaovao momba ny ankivy, maro ireo “spambots” no nipoitra tato ho ato, mitoraka tweet fanambarana mitovy miverimberina manerana ireo kaonty maro, indraindray mampiasa sary famatarana mitovy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/28/16698/
 fanentanana hanao ankivy: http://www.codepink4peace.org/section.php?id=415